Budada Raw Parabolan (23454-33-3) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Daawada Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) waa magaca calaamad iyo magaca ganacsiga ee steroid antholic trenoid Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate, caadi ahaan iyo si aan rasmi ah loo soo gaabin sida Tren Hex ama Trenbolone Hex. Waxaa loo yaqaan 'steroid anabolic' oo macquul ah oo loogu talagalay isticmaalka cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha maanta.
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada (23454-33-3) video
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada (23454-33-3)
Root Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada waa hormoonada hormoonada borotiinka iyo ugu wanaagsan ee anabolic, waxay kor u qaadi kartaa synthesis protein iyo sidoo kale sameynta dheelitirka nitrogen ee wanaagsan. Waxay xaqiijisay inay tahay badeecad aad u fiican oo lagu hormarinayo xajmiga iyo awoodda joogtada ah ee borotiinka iyo kalooriyada ku filan, waxay kor u qaadaan hababka nudaha unugyada jirka waxayna dib u jebin karaan nidaamka saxda ah. Waxay ka foogoobaan steroid anabolic iyadoo la adeegsanayo jirka jirka iyo jimicsiga. Waxaa inta badan loo yaqaanaa daroogada dhismaha ah, oo si aad ah loogu jecel yahay cayaartoyda awoodda ay u leeyihiin inay kor u qaadaan xoojinta degdegga ah ee xoogga, xajmiga muruqa, iyo qeexidda.
Daawada Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan), nolosha nuska ah ee aaladaha steroid ah ayaa badanaa ku xiran tahay saamiga barafowga ee biyo-gelinta: W silsilada dheer ee dhererka, korodhka sare, iyo mudada dheer ee nolosha. Kaarboonkani gaar ahaaneed wuxuu si aad ah ugu dhowaan karaa marka la barbardhigo qashin-dhaliye; Nolosha nuska ah waxay u egtahay in yar oo ka yar todobaadkii.
Root Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada (23454-33-3) Smamnuucista
Product Name Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada (23454-33-3)
Magaca Kiimikada Cyclohexylmethyl 17-beta-hydroxyestra-4,9,11-Trien-3-hal carbonate; ESTRA-4,9,11-TRIEN-3-ONE; Estra-4,9,11-trien-3-one, 17b-hydroxy-, cyclohexylMethylcarbonate (8CI); 4-CDC
Molecular Wsideed 410.55
barafku Psaliid 90-95 °
Karkarinta Psaliid 607.9 ° C
Color budada budada ah
Application waxaa loo isticmaali karaa walxo daawo ah, hormoonada steroid, Anabolin. Sida hormoonka haweenka iyo hoormoonka anabolic.
Waa maxay budada Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) (23454-33-3)?
Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate, ama trenbolone cyclohexylmethylcarbonate, oo lagu iibiyo magaca calaamadaha calaamadaha Parabolan iyo Hexabolan, waa unugyada caanaha naaska ah ee loo yaqaan 'anabolic-androgenic steroid' (AAS) oo ah nandrolone iyo ester-ester - gaar ahaan, C17β hexahydrobenzylcarbonate (cyclohexylmethylcarbonate) ester of trenbolone.
Root Trenbolone budada Cyclohexylmethylcarbonate waa hormoonada hormoonada borotiinka iyo habka ugu wanaagsan ee anabolic, waxay kor u qaadi kartaa synthesis protein iyo sidoo kale abuurista dheellitirka nitrogen ee wanaagsan. Waxay xaqiijisay inay tahay badeecad aad u fiican oo lagu hormarinayo xajmiga iyo awoodda joogtada ah ee borotiinka iyo kalooriyada ku filan, waxay kor u qaadaan hababka nudaha unugyada jirka waxayna dib u jaanqaadi karaan hababka kala duwan ee loo yaqaan "staboid" iyadoo la adeegsanayo jirka jirka iyo jimicsiga. Waxaa inta badan loo yaqaanaa daroogada dhismaha ah, oo si aad ah loogu jecel yahay cayaartoyda awoodda ay u leeyihiin inay kor u qaadaan xoojinta degdegga ah ee xoogga, xajmiga muruqa, iyo qeexidda.
Sida Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada (23454-33-3) Cycle
Tusaale ahaan wareegga Parabolan (12 todobaadkii wareega wareegga)
- Qalitaanka Cypionate ee 500mg / Isbuucle
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) at 228mg / usbuuc
Dareemaha noocan ah ee Parabolan oo kaliya ayaa kaliya ah barta ugu horreysa ee loogu talagalay kuwa isticmaala steroid-ka khibradda leh ee kaliya ee helaya isticmaalka Parabolan. Testosterone Cypionate, oo ah kala duwanaansho joogta ah ee Testosterone oo ah qiyaasta jirka jirka ee 500mg / usbuuc ayaa waxaa la barbar dhigi doonaa Parabolan sababtoo ah waafaqsanaan la'aanta ku dhow. Labada dhinacba waxay muujinayaan nus aad u kala duwan iyo heerarka sii deynta. Bilaabidda wareegga Tani waxay noqon kartaa mid si weyn loo kala saaro sida boodhka ama xajmiga wareega ee miisaanka loo isticmaalo sababtoo ah qiyaasaha loo isticmaalo.
Tusaale ahaan wareegga shaybaarka ah (14 todobaadkii wareega wareegga)
- Qalitaan tijaabo ah Entanthate at 100mg / toddobaad
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) at 350mg / usbuuc
- Qalabaynta (Boldenone Undecylenate) ee 400mg / usbuuc
Usbuucyada 1 - 6:
- Dianabol (Methandrostenolone) ee 25mg / maalin
Iskuduwaha dhexdhexaadka ah ee Parabolan waxaa loo kala saari karaa mid kale oo soo noqnoqonaya ama ballaaran oo soo noqnoqonaya, isla markaana wuxuu isku daraa saddexda steroid ee anaboliska oo la mid ah heerarka sii deynta iyo noloshii nuska. Testosterone Enanthate waxaa loo isticmaalaa qiyaasta TRT ee 100mg / usbuuc, halka Equipoise loo isticmaalo 400mg / usbuuc. Wareeggaasi waa inuu soo bandhigaa dhacdooyin yar oo aromatis ah, marka laga reebo suurtogalnimada Dianabol. Dianabol waxaa la geliyaa bilowga wareegga waxayna soconeysaa ilaa usbuuc 6 si loo bilaabo bilawga wareegga. Bilaabista Kick waa dadaal ah in lagu tuuro xarun (sida caadiga ah steroid afka ah ee afka laga qaato) kaas oo ku gaari doona heerarka dhiigga dhiiga bilowga usbuucyada ugu horeeya inta ay xeryaha dheeraadka ah si tartiib ah ugu dhisi karaan nidaamka userka. Isticmaalka qolka kickstarting ayaa la sameeyaa si qofka isticmaala uu ufududo guulaha dhowrka asbuuc ee ugu horeeya marka aanay si kale u aragin isbeddel dhakhso ah oo ka imanaya xeryaha dheeraadka ah ee kali ah.
Baaskiilada Habboon ee sare
Tusaale ahaan wareegga shaybaarka ah (12 todobaadkii wareega wareegga)
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) at 500mg / usbuuc
- Primobolan (Methenolone Enanthate) ee 1,000mg / usbuuc
- Afka Winstrol (Stanozolol) ee 50mg / maalin
Iskuduwaha dhexdhexaadka ah ee Parabolan waxaa si sahlan loogu kala saaraa sidii tartiib tartiib loo gooyo ama wareegis goynta ah oo lumis dufan ama faa'iido badan oo cufan leh (iyadoo la yareeyo dufan yar ama biyo yar / suunji ah). Mar labaad, xayndaabka dhaqdhaqaaqa ee la mid ah marka loo eego nolosha nus nus ayaa loo wada isticmaalaa. Testosterone Enanthate ayaa loo laabtay kaalinta taageerada TRT mar kale. Primobolan, oo ah kuwa ugu jecel tartanka tartanka tartanka (gaar ahaan tartanka ka hor) ayaa la adeegsadaa, faa'iidooyinka laga helo qiyaasta sare waxay ka caawineysaa helitaanka muuqaalka adag ee cufnaanta jirka, gaar ahaan marka la isticmaalo Parabolan. Isticmaalka Winstrol (qaabka afka) ma aha oo kaliya ujeedka ujuurada ah ee loo yaqaan 'kickstart', laakiin sidoo kale inay ka caawiso isticmaalka isticmaalka qalalan, ripped, iyo muuqaalka adag ee jirka.
Root Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada (23454-33-3) Qiyaasta
Parabolan waa steroid anabolic kaas oo qaadaya xoog xoog leh oo waxoogaa ah. Mid ka mid ah ampu of Parabolan waxay qaadataa 76mg per milliliter. Tani waxay ku siinaysaa 50mg of Trenbolone firfircoon kasta oo ampule. Meelaha lagu daweeyo, Parabolan waxaa caadiyan la siiyaa xilliyo 3 bishiiba ama mid ka mid ah dhowr maalmood oo 10 ah. Ujeedada hagaajinta waxqabadka, 3-4 illaa toddobaadkii waa mid caadi ah oo waa in la soo saaraa natiijooyin muhiim ah. Qiyaaso badan ayaa la isku dayi karaa, laga yaabee 5-6 illaa iyo toddobaadkii waxtar maahan. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa heli doona 3-4 usbuuc kasta si ay u noqdaan waxay u baahan yihiin.
Iyadoo aan loo eegin wadarta qiyaasta, toddobaadka 8-10 ee isticmaalka waa heer. Taas macnaheedu maaha wadarta wareegga isugeynta stobasku waa isbuucyo 8-10 laakiin waxay ka dhigan tahay qaybta Qaybta Qorshaha. Parabolan wuxuu sidoo kale si fiican ugu dhejin doonaa steroids badanaaba. Si fudud u dooro steroids oo ku habboon baahiyahaaga ugu fiican wareeggaas. Qorshayaasha noocan oo kale ah waxaa ka mid ah Masteron iyo Winstrol inta lagu jiro marxaladda jarista iyo iyada oo ay ku jirto tijaabo ku filan. Inta lagu jiro marxaladda xajmiga badan ee testosterone waxay u shaqeyn doontaa si wadajir ah ula Trenbolone iyadoo lagu daro dheellitirka suuragalka ah ee Anadrol ama Dianabol.
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) budada (23454-33-3) Faa'iidooyinka
Parabolan waa stomoid xoog leh oo leh faa'iidooyin badan. Inta badan waxaa isticmaala ciyaaro, jimicsi, iyo qofkasta oo raba in uu kor u qaado ama yareeyo miisaanka iyo kordhinta dulqaadka. Magaciisa sayniska waa Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate. Steroid waa hab ka xoog badan kuwa kale ee antrolic and anabolic sterids ee suuqa iyo xitaa lama barbar dhigi karo testosterone caadi ah.
Parabolan waa mid aad u badan oo leh faa'iidooyin waaweyn haddii tilmaamaha isticmaalka la raaco kan dambe. Waxaa badanaa loo isticmaalaa dhisidda murqaha, tani waxay sabab u tahay awoodda xajinta nitrogen, taas oo horseedaysa kordhinta borotiinka. Qanjidhada ayaa ah muruqyada dhismaha muruqyada, sidaa daraadeed, kor u qaadista borotiinka wax soo saarku wuxuu u horseedi doonaa inuu kiciyo. Waxay sidoo kale kordhisaa tirada unugyada dhiigga ee cas iyo sababta oo ah unugyada dhiigga cas ayaa masuul ka ah inay u soo qaadaan oksijiinta muruqyada iyo unugyada jidhka ku wareegsan, taasina waxay ka caawineysaa inay sameyso dulqaad. Sidaa daraadeed, ma daalin doontid markaad shaqeyneysid ama aad sameynaysid waxqabad kale oo xooggan. Tani waxay faa'iido u leedahay ciyaartoyda iyo tartanayaasha tartanka. Parabolan ayaa sidoo kale ka caawiya jidhka inuu dhakhso u bogsado kadib dhaqdhaqaaq adag ama dhaawaca ka dib.
Si ka duwan noocyada kale ee anabolic anabolic, Parabolan waxay kor u qaadaysaa dheef-shiid kiimikaadka jirka sidaa daraadeed waxay ka caawisaa miisaanka luminta. Steroid-ka wuxuu horjoogsanayaa ficilka hoormoonada kaas oo kiciya culeyska macaamilka iyadoo la dhiirigelinayo beddelidda sonkorta si dufan leh halkii uu jabin lahaa. Waxa kale oo ay kor u qaadaysaa wax-qabadka nafaqada, taas oo awood u siineysa jirka in uu waxtarka ugu badan ka helo nafaqooyinka cuntada la cuno.
Soo iibso Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) laga bilaabo Buyaas.com